औषधीय मसरूमहरूको अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्याक्शन - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
औषधि मशरूम प्राचीन अभाव पछि उनीहरूको असाधारण स्वास्थ्य लाभका लागि चिनिन्छन्। हाल, स्वास्थ्य सुधार गर्न र ऊर्जा बढाउनको लागि औषधीय कवकलाई मुख्यधारा वस्तुमा परिणत गर्दछ।
औषधीय कवकको स्वास्थ्य समर्थन प्रभावहरूको पूरा स्पेक्ट्रम अनुभव गर्न, पोलिसकेक्राइड्स जस्ता यौगिहरु मशरूम कक्षबाट रिलीज हुनु पर्छ।
अल्ट्रासोनिक निष्कर्षण वनस्पतिको जैवक्रियात्मक यौगिकहरू अलग गर्न एक उत्कृष्ट प्रविधि हो, जस्तै रीची, लायन्स म्यान, कर्डेसीपी, शिइक, चगा आदि।
औषधीय कवक आफ्नो अस्तित्वको आधारमा सुपरफूड र नोटोट्रिकको रूपमा स्थापित भएको छ जुन संज्ञानात्मक कार्य र प्रतिरक्षा प्रणालीमा असाधारण प्रभावहरूको कारण हुन्छ। उनीहरूको स्वास्थ्य र संज्ञानात्मक बढ्दो प्रभावहरूको बावजुद, औषधीय मशरूमहरू रोगहरू (उदाहरणको सर्जक, मधुमेह, सुमन आदि) को रोकथाम र उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। खाद्य कवकको सबैभन्दा प्रख्यात प्रजाति चगा, रीईसी, शेरको म्यान, कर्डेसीपी, शिइट, र मेटाक हो।
अल्ट्रासोनिकेसन उच्च-गुणस्तरको मशरूम एक्स्ट्र्याक्ट उत्पादन गर्न द्रुत र हल्का निकाल्ने विधि हो। भिडियोमा, एक UP400St shitake एक्स्ट्राक्शनको लागि प्रयोग गरीन्छ।
कोल्ड मशरूम एक्सट्र्यासन UP400St प्रयोग गरेर २२ एमएम प्रोबको साथ
सबैभन्दा प्रमुख स्वास्थ्य प्रभावहरू, फgi्गा रोग प्रतिरोध शक्ति बढाउन, स्नायु वृद्धि कारक (NGF) बढाउन, शारीरिक गतिविधिमा धीरज सुधार र दीर्घायु देखाइएको छ। बायोएक्टिभ यौगिकहरू, जसले स्वास्थ्य बढाउने प्रभावहरू निम्त्याउँछ, पोलिसेकेराइडहरू हुन्? -ग्लूकान र? -ग्लुकान्स। ग्लुक्सनको प्रोफाइल विशिष्ट फgi्गी प्रजातिहरूको बीच भिन्न हुन्छ र बिभिन्न प्रभावहरू प्राप्त गर्न विभिन्न मशरूमहरूको विशेष प्रयोगको लागि जिम्मेवार हुन्छ। उदाहरणका लागि, सिंहको मानेले स्नायु वृद्धि कारक (NGF) लाई बढावा दिन्छ, जबकि Cordyceps फ fun्गरस धैर्यता सुधार गर्दछ, र Reishi प्रतिरक्षा प्रणाली र दीर्घायु समर्थन गर्दछ।
किन मशरूम निकाल्नुहुन्छ?
मशरूम निकाट फायदेमंद हुन्छन् किनकि केवल सानो मात्रामा उपभोग गरिन्छ त्यस्ता प्रभावहरू जस्तै जब मशरूम पाउडरहरू इन्जिन गरिन्छ, जुन आवश्यक प्रभावहरू प्राप्त गर्न आवश्यक हुन्छ। अल्ट्रासोनिक रूप देखि पृथक मशरूम निकाय तपाईंलाई एक धेरै एकाग्रता रूप मा सबै महत्वपूर्ण पोषक तत्व र जैव निष्क्रिय पदार्थ दि्छ!
UP400St फंगुबाट पोलिसेक्रोइडाइड निकासीको लागि
Polysaccharides को अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष
Polysaccharides को अलग गर्न को लागी (जस्तै अल्फा-ग्लुकोन्स र बिटा-ग्लुकोन्स), ट्रिटरपेन्स र औषधीय मशरूम देखि अन्य जैवक्रियात्मक यौगिकहरू, अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष सबैभन्दा सुविधाजनक, प्रभावकारी, र कुशल प्रविधि हो।
धेरै खाद्य मशरूममा पाइने अन्य लाभकारी घटकहरू सेलेनियम, भिटामिन डी र भिटामिन बी3हुन्। तीव्र अल्ट्रासोनिक्स द्वारा, कवकको सेल पर्खालहरू (जसलाई चिपिनु भन्दा बनाइन्छ) को प्रबलित हुन्छ र लुकाएको छ जसले पोलीसेकेक्राइड्स, भिटामिन आदि जस्ता रासायनिक यौगिकहरू वरपरको विलायकमा रिहा गरिन्छ। अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष पारंपरिक निकासी प्रविधीहरु को तुलना मा एक धेरै छोटो निष्कर्षण समय को अंदर bioactive कम्पोज्स को पूरा स्पेक्ट्रम को अत्यधिक कुशल जारी छ।
निष्कर्षण पछि, जैविक सक्रिय यौगिहरु अलग-अलग, उच्च प्रभावकारी मशरूम निकासी तयार गर्न को लागी निस्पंदन, आसवन / वाष्पीकरण र वर्षाद्वारा अलग गर्न सकिन्छ। ती मशरूम निकाटहरू पछि दबाइहरु, आहार पूरक, कार्यात्मक खाना अवयव, ट्रेक्रेक्चर, र टनिक्स मा प्रसोधन गरिन्छ।
अल्ट्रासोनिक पानी वा सोल्भेन एक्सटेक्सन
अल्ट्रासोनिक निकासी को एक विशाल फायदा हो सल्विन्टहरूको व्यापक चयन बाट छनौट गर्न अल्ट्रासोसोनिकले फाइटोकोहेक्कोल र बायोटेक्टिव यौगिकहरूको अलगावले पानी, इथेनॉल, मेथनोल, इस्ओप्रोपानोल, पानी / इथेनॉल मिश्रण, ग्लिसरीन, सब्जी तेल आदि जस्ता सल्विन्टहरूमा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ।
लक्षित यौगिकहरुलाई अलग गर्न को लागी अल्ट्रासोनिक रूप देखि सहायता को निकासी, इथेनॉल, मेथनोल, isopropanol को रूप मा पानी या solvents मा प्रदर्शन गरिन सक्छ। देखि मशरूम ज्यादातर पानी घुलनशील लक्ष्य कम्पोज्स र केवल केहि गैर पानी घुलनशील घटकों, एक पानी निकासी छ सामान्य रूपमा मनपर्ने विधि। एक उच्च शराब प्रतिशत संग बचाव विशेष रूप देखि triterpenes मा उच्च अर्क को अलग गर्न को लागि प्रयोग गरिन्छ।
SonoStation – एक अल्ट्रासोनिक प्रणाली 2x 2kW अल्ट्रासोनिक्स संग, टकराव टैंक र पंप – ठूलो मात्रा को निकासी को लागि उत्कृष्ट छ।
उच्च गुणस्तर पूर्ण स्पेक्ट्रम निकाट
हल्का, गैर थर्मल प्रक्रिया (चिसो निकासी)
फार्मा- खाना खाने
छनौट गर्न विभिन्न सल्टेन्टहरू
सुरक्षित & सञ्चालन गर्न सजिलो
अल्ट्रासोनिक निष्कर्षको नतीजा
अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया मापदण्डहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् जब यो अलगाव र फियटो-रसायनहरूको पुनःप्राप्ति हुन्छ। पहिलो, अल्ट्रासोनिक मापदण्डहरू जस्तै आयाम, दबाब, र तापमानले निष्कर्षण प्रक्रिया उच्चतम उपज र गुणस्तरलाई धुन गर्न महत्त्वपूर्ण कारकहरू हुन्। दोस्रो, ठीक तरिकाले नियन्त्रित प्रक्रियाका सर्तहरू यो सुनिश्चित गर्दछ कि अङ्कहरू निकै बलियो प्रक्रियाको असरले घटाइदियो। उदाहरणका लागि, पोलिसकेक्राइड्सको बोसोनिकल यौगिहरू उच्च तापमानमा उजागर हुँदा गिरावटको प्रलोभन गरिन्छ।
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स’ निकायहरू नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ – आयाम, दबाव, तापमान इष्टतम परिस्थितियों लाई सेट गरेर। यसले reproducible परिणाम, निकासी गुणस्तर, र मानकीकरण प्रक्रियाको लागि अनुमति दिन्छ।
अनुसन्धान (Alzorqi et al।) ले थाहा छ कि अल्ट्रासोनिकेशन द्वारा निकाले मलेशियन मशरूम को (1-3; 1-6) -β-d-glucans एक उच्च एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि, उच्च आणविक वजन र इष्टतम डिग्री को तुलना मा जब निष्कर्ष उत्पादन को तुलना मा पारंपरिक निकासी प्रविधिहरु द्वारा।
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक्स को दीर्घकालिक अनुभवी निर्माता हो, जो botanicals र कवक देखि bioactive घटकों को अलगाव को लागि सफलतापूर्वक लागू हुन्छन्। एक अर्काको एक अर्काे एक अर्काे एक अर्कालाई थाहा छ, जसरी नै तपाईले आफ्नो कामको बारेमा जानकारी गराउनुभएको छ। तपाईले तपाईलाई सहयोग पुर्याउनुभएको छ? । Botanicals बाट bioactive कम्पोज्स जारी गर्न को लागी, उच्च एम्पलिट्सहरू आवश्यक हुन सक्छ – विशेष गरी जब तवरको सेल पर्खालहरु लाई पतित हुनु पर्छ र लुकाया जाना चाहिए। Hielscher अल्ट्रासोनिक्स अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर, जस्तै UIP500hdT वा UIP2000hdT, 200μm सम्म धेरै उच्च उत्प्रेरक चलाउन सक्छ। यी उच्च प्रवृतिहरू 24/7 सञ्चालनमा, निरन्तर रूपमा चल्न सकिन्छ। हेल्सेचर अल्ट्रासोनिक्सको बलियोताले भारी शुल्क र वातावरणको मागमा हिंसा रहित 24/7 सञ्चालन सुनिश्चित गर्दछ।
बलियो & कम रखरखाव
परामर्श & सेवा
सजिलो & सञ्चालन गर्न सुरक्षित
Alzorqi I., सुडेर एस एस, लु TJ, Manickam एस (2017): अल्ट्रासोनिक रूपमा मशरूम, गुणक गुणहरु र एंटीऑक्सीडेंट गतिविधिबाट अल्ट्रासोनिक निकाले β-D-glucan। अल्ट्रासोनिक सोनिककोमिस्ट्री 2017. 531-540।
अल्जोर आइ।, सिंह ए।, मनिकोम एस।, अल-क्विमिली एच। (2016): ग्याणद्मार्ग लाइसिड्युमको जीएमड-डी-ग्लुजन polysaccharides को अल्ट्रासाउन्ड सहायता निकासी (संयुक्त अरब अमीरात) को अनुकूलन को लागी संभावित स्तर को लागि। संसाधन-कुशल टेक्नोलॉजीज 2016।
खान, ए.ए., गेनी ए, मसाद एफ, कुस्स एस, अहमद एम। (2014): एटिओक्सिडेंट र β-ग्लुआन को कार्यात्मक गुणहरु खाद्य मशरूम एरक्रिरस बिस्ोस्पोरस, प्लेरुटोस ओस्ट्रियस र कप्निअस एट्रानेररीसबाट निकाले। मशरूम जीवविज्ञान र मशरूम उत्पाद (आईसीएमएमएमपी 8) 2014 मा 8 औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यवाही।
वर्डेनगागा आर, सैंटोस डीटी, मेयरेल्स एमएएम (2014): अल्ट्रासोनिक विक्रयकरण को प्रयोग गरेर औषधीय पौधों बाट जैव निष्क्रिय यौगिकों निकासी को तीव्रता। Pharmacogn Rev. 2014 Jul-Dec; 8 (16): 88-99।
अल्ट्रासोनिक निकासी – कार्य सिद्धान्त
अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष एक सरल, सस्तो, तेज र कुशल प्रविधि हो, जसले तरल ठोस निष्कर्ष बढाउँछ र पारंपरिक निकासी प्रविधिलाई उत्प्रेरित गर्छ। अल्ट्रासोनिक ठोस-तरल निकासीको मुख्य फाइदा तीव्र निकासी केनेटिटिक्स र मास ट्रांसफरमा आधारित हुन्छ र साथै निकासीको उपजको वृद्धिमा आधारित हुन्छ। अर्को लाभ कम तापमान मा निष्कर्षण प्रक्रिया को चलान को अवसर हो कि गिरावट को कारण थर्मो-संवेदनशील यौगिकहरुलाई रोकथाम। वैकल्पिक अलगाव प्रविधिहरू जस्तै माइक्रोव्याव वा सुपरक्रिटिकल CO2 जस्ता तुलनात्मक रूपमा, अल्ट्रासोनिक अक्टोबर लागतमा (दुई, खरिद र अपरेशन) को साथ साथै प्रयोगकर्ता-अनुकूल र सुरक्षित गर्न सुरक्षित छ।
अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष ध्वनिक cavitation र यसको हाइड्रोड्रेंटिंक कतरनी बल मा आधारित छ। Hielscher अल्ट्रासोनिक्स’ वनस्पति विज्ञानबाट फोटो-रसायनहरूको निकासीका लागि प्रणाली तीव्र अल्ट्रासोनिक तरंगहरू र cavitation सिर्जना गर्दछ।
ध्वनिक cavitation – अल्ट्रासोनिक प्रसंस्करणको घटना: तीव्र अल्ट्रासोनिक तरंगहरू एक तरल माध्यममा युग्मित हुन्छन् जब, संपीडन र विस्तार चक्र तरल पदार्थमा लागू हुन्छन्। विस्तार (दुर्लभ) को समयमा, निर्वात बुलबुले वा cavities तरल मा हुन्छ। यो वैक्यूम बुलबुले बनाइन्छ जब उल्टो नकारात्मक द्रव तरल पदार्थको तर्साई बल भन्दा बढी हुन्छ। विभिन्न सम्पीडन / दुर्लभ चक्रहरूमा, वैक्यूम बुलबुले बढ्दै जान्छ जबसम्म उनीहरूले एक बिन्दुसम्म पुग्छन् जहाँ उनीहरूले थप ऊर्जालाई अवशोषित गर्न सक्दैनन् ताकि तिनीहरू उल्लङ्घन (बबल प्रत्यारोपण) बन्द गर्दछन्। बबल प्रत्यारोपणको समयमा चरम अवस्था जस्ता धेरै उच्च तापमान र दबाबको भिन्नता, तरल स्ट्रिम र कतरनी बल स्थानीय रूपमा हुन्छ। ती गहन बलहरू कोशिकाहरू (तरकारी र ऊतक) तोक्छन् ताकि अन्त-सेलुलर सामग्री (उदाहरणका लागि पोलिसेकेक्राइड्स, Terpenes, प्रोटीन, फ्लोभोन आदि) विलायक मा रिलीज गरिएको छ। गठन को प्रक्रिया, निर्वात बुलबुले को विकास र पतन को रूप मा जानिन्छ cavitation।
फ्यूंग ईुकरीटिक जीवहरु को समूह को सबै सदस्यहरु को लागि वनस्पति शब्द हो जसमा सूक्ष्म जीवविज्ञानहरु जस्तै कि पातहरु, मोल्डहरु र मशरूम शामिल हो। विशेष गरी पारंपरिक औषधि (जस्तै एशियाई / चिनियाँ चिकित्सा), फंगुले गुप्त प्रभावहरू जस्तै संज्ञानात्मक सुधार, प्रतिरक्षा प्रणाली बूस्टर वा दीर्घायु प्राप्त गर्न को लागी प्रबन्ध गरिन्छ। आजकल, औषधीय मशरूम न केवल वैकल्पिक दबाइको रूपमा प्रयोग गरिन्छ तर फङाई अङ्कहरूले कार्यात्मक भोजन वा सुपरफ्रिडको रूपमा पनि उपभोग गरिन्छ। उदाहरणका लागि, फंगु जस्तै मटकेक, सिर्डसेप्स, टर्की पूर, रिशिइ इम्युनोमोड्युलेटरहरूको रूपमा उनीहरूको प्रभावको फायदा लिन लागेका हुन्छन्। धेरै फङ्गुर प्रजातिहरु जस्तै Psilocybin मशरूम (कोलोक्सा तरिकाले जादू मशरूम को रूप मा जानिन्छ) उनको psychedelic गुणहरुको लागि प्रयोग गरिन्छ। मशरूम बिरुवाहरू छैनन् र तिनीहरू कवकको राज्यमा वर्गीकृत छन्।
औषधि कवकमा पाइएको पोलसेकेचेराइडहरू महत्त्वपूर्ण जैविक सक्रिय यौगिकहरू हुन्। उनीहरूले औषधि र पोषक तत्वका लागि जैव-रसायनिक यौगिक प्रयोगका रूपमा प्रयोग गरेका छन्, यसले विकिरण नियमहरू जस्तै प्रतिरक्षा विनियमन, विकिरण क्षति, विरोधी रक्त कोयलेशन, साथ-साथ विरोधी-क्यान्सर, एन्टी-भाइल र हाईपिगोलीमिक गतिविधिहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। फंगु-व्युत्पन्न पोलिसकेचराइडहरू लेन्टिनान, स्किजोफिलन र कर्टिनलाई इम्युनोओटेटिक (जापानमा, कोरिया र चीनमा प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउने ड्रगहरू) को रूपमा स्वीकार गरिएको छ।
Polysaccharides को बावजूद, फंगुले phenols, heteropolysaccharides, glycogens, भिटामिन र triterpenes अन्य लाभकारी घटकों को बीच समावेश गर्दछ।
औषधि मशरूम प्रजातिहरू
मा Chaga मशरूम, जुन पनि भनिन्छ Inonotus obliquus या ब्ल्याक ट्री फंगुस (अधिक colloquialially सिन्डर कंक, बिरक कंक, क्लिंकर polypore) भनिन्छ, polysaccharides सबै भन्दा प्रमुख सक्रिय यौगिहरु हो। Chaga को polysaccharides को एक मुक्त कट्टरपंथी scavenging धेरै मजबूत एंटीओक्सिडेंट गतिविधि छ।
सिंहको मान (हेरिसियम erinaceus) एक खाद्य र औषधीय मशरूम दांत कवक को समूह हो। सिंहको म्यान यसको न्यूरोपोरोटिक र नोटोप्रोफिक प्रभावको लागी जानिन्छ जुन शेर म्यान प्रयोग गरिन्छ मेमोरी र संज्ञानात्मक प्रकार्यहरू सुधार गर्दछ।
Reishi (Ganoderma लुगिडम, लिङ्ग झाई / लिंगजी, म्यानेंटेक, अमरताको मशरूममा पनि जानिन्छ) एक पोलपोर कवक हो, जुन यसलाई सजिलैसँग लाल-पोर्टेबल, गुर्देको आकारको टोपीद्वारा मान्यता दिइएको छ। रीईसी फंगुस तथाकथित ganoderic एसिड triterpenes को एक समूह को उत्पादन गर्दछ। गानोडेरिक एसिड एक आणविक संरचना को प्रदर्शन गर्दछ जो स्टेरॉयड हार्मोन को समान छ। यसबाहेक, रीसीमा पाइने अन्य यौगिकहरू पोलिसकेचराइडहरू (उदाहरणका लागि बीटा-ग्लुआकान), कुमिर्न, म्यानिनोल, र अल्कोसेड्स समावेश छन्। मशरूम देखि अलग Sterels समावेश गर्दछ ganoderol, ganoderenic एसिड, ganoderiol, gododermanontriol, lucidadiol, र ganodermadiol। पाक कला परिप्रेक्ष्यबाट, रिही यसको कडा स्वादको लागि चिनिन्छ र प्राय: कफी पेय पदार्थहरूमा खपत गरिन्छ।
Shitake (Lentinula edodes; ब्लु वन वनस्पतिको रूपमा वर्गीकरण गरिएको ब्रह्माण्ड टाउको मशरूम, जियांग गुआ, फ्रान्सिन्ट मशरूम) एशियाई व्यंजनहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। जब स्वास्थ्य कारणहरु को लागी प्रशासित छ, शीइकेक प्रतिरक्षा प्रणाली को बढावा गर्दछ र सूजन को एक महत्वपूर्ण कमी मा परिणाम।
कोरिलोस बिरुवा (Trametes versicolor, Polyporus versicolor; बोलचालमा टर्की टेल मशरूम भनिन्छ, युन झी, कवाराटाके) ले पोलिसेकेराइड PSK, PSP, र Kresin साथ साथै B-1,3 र B-1,4 ग्लूकन्स समावेश गर्दछ। पोलिसेकेराइड्स केमोथेरापीको साथ प्रयोग गर्दा निश्चित क्यान्सर भएका बिरामीहरूमा प्रतिरोध क्षमता सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ। परम्परागत चिनियाँ चिकित्सामा, टर्की टेल टॉनिकको रूपमा प्रयोग गरीन्छ।
Cordyceps sinensis (Ophiocordyceps sinensis; चिनियाँ कमला फिङ्गस, दाङ चोंग जिया काओ, यर्था गोन्बु) को रूपमा पनि चिनिन्छ। असाधारण एंटीऑक्सीडाइटिक गुणहरूसँग अर्को कङ्गो हो। Cordyceps हानिकारक मुक्त रैडिकलहरूलाई बेवास्ता गर्ने बलियो एन्टिओक्सिड्यानहरू छन् र शरीरको अनियमित एंटीओक्सिडेंट प्रणालीको गतिविधि बढाउँछ।
Maitake (Grifola frondosa; बादलको शरिर, हाउ शू हुआ, हेन-द-द-काठ, रामको टाउको, भेडाको टाउको) एक पोलपोर कवक हो जुन यसलाई निर्वाह प्रतिरक्षा प्रणाली र अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली दुवैलाई प्रोत्साहन दिईएको छ। अनुसन्धानले माईटेके स्तन कैंसर रोगी प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित गर्दछ। यसबाहेक, यसले रक्त शर्करा कम पार्छ प्रभाव देखाउँछ किनभने कवकले अल्फा ग्लूकोइडाइज अवरोधक समावेश गर्दछ।
Agaricus subrufescens (को सर्तहरू पनि भनिन्छ Agaricus blazei, Agaricus brasiliensis, Agaricus rufotegulis; बहुमुखी बादाम मशरूम, सूर्य को मशरूम, भगवान को मशरूम, मशरूम को मशरूम, शाही सूरज एरिरिअस, जिसँग्रोंग, या हिमात्सटेक) एक खाद्य मशरूम, जो यसको मीठे स्वाद र बादाम को सुगंध को विशेषता हो। Agaricus मशरूम एक लोकप्रिय औषधीय कवक हो, जसका प्रायः यसको प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावहरु लाई प्रभावित गर्दछ।